Faarax Macalin: "Qawda maqashii waxna ha u qaban" - BBC Somali
Faarax Macalin: "Qawda maqashii waxna ha u qaban"
21 Juunyo 2011
Image caption Faarax Macalin waa Guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya
Guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka waddanka Kenya, Faarax Macalin ayaa sheegay in beesha caalamku ay ka gaabisay wax ka qabashada dhibaatada Soomaaliya ka taagan.
Faarax Macalin waxa uu sheegay inay jiraan dad oo aan wanaag u rabin xaaladda Soomaaliya inay degto.
Guddoomiye ku xigeenku waxa uu sheegay in xalka umadda Soomaaliyeed ay ku xiran tahay Soomaalida, taasina uu u sheegay sida uu yiri wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Augustine Mahiga.
Waxa uu sheegay in hawsha Soomaaliya ka socota ay tahay "Qawda maqashii waxna ha u qaba" isagoo tusaale u soo qaatay dalkiisa Kenya oo uu sheegay markii dagaalku ka dhacay in beesha caalamku ay u soo dirtay dad wax ku ool ah si dhibaatada loo qaboojiyo.
Waxaa kale oo uu soo qaatay Koonfurta Sudan oo loo diray Thabo Mbeki, Libya waxaa loo diray Jacob Zuma, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waxaa loo diray Pierre Buyoya, Burundi waxaa loo diray Julius Nyrere.
Laakiin Soomaaliya, waxa uu sheegay in loo soo diro wakiilo dalalkoodiiba dhibaatooyin ka taagan yihiin.
Faarax Macalin waxa uu u warramay weriyaha BBC, Cabdirisaaq Xaaji Catoosh.